ဈေးသည်နဲ့…ဆေးသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဈေးသည်နဲ့…ဆေးသည်
Posted by Kaung Kin Pyar on Sep 24, 2014 in Creative Writing, Short Story | 57 comments
ဒါပေမယ့်…ဒီကမ်းခြေမှာ…လူသူ အတော်ရှင်းနေတယ်…ဟာဝိုင်ရီဆိုရင်တော့…လူတွေနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ် ဆူညံနေရမှာပဲ…..။ ဒါဆို….ဒါ…ဟာဝိုင်ရီတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး….
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်….တ၀ုန်းဝုန်းတက်လာတဲ့ ပင်လယ်ရေလှိုင်းတွေနဲ့ပဲ ငါဆော့ရင် ကောင်းမလား…၊ ခရုခွံလှလှတွေပဲ လိုက်ကောက်ရင် ကောင်းမလား…၊ သဲအိမ်ပဲ ဆောက်ကြည့်ရကောင်းမလား…
ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုး၊ ဒီဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနဲ့…ကျနော်ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကမ်းခြေအတိုင်းပဲ လျှောက်နေတယ်…။ ဖိနပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီး…သဲမြေတွေထဲ…ခြေချောင်းတွေနဲ့ ထိုးဆော့လိုက်..၊ ခုန်ပေါက်လိုက်နဲ့…စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်မြူးနေတုန်း ရှိသေး
ခေါ်သံကြောင့် ကျနော် လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်…..။
ကျနော့်ကို ခေါ်လိုက်တဲ့သူက … သူ့ကိုကျနော်ကြောက်သွားမှန်းသိတော့…ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ မလှမပ ပြုံးတယ်…။
ကျနော် … မကြောက်ဘဲ နေမလား….၊
သူ့ဆီက လူသံသာထွက်လာတယ်..၊ သူ့မျက်နှာကဖြင့်…ကျားမျက်နှာကြီးနဲ့…
“မင်းကဘာလို့ မြေကြီးပေါ် ခြေကို အပြားလိုက်ချထားတာတုန်း၊ ပြီးတော့ မင်းက ခုန်ခုန်နေလိုက်သေးတယ်…..။ တယ်….ငါ လုပ်လိုက်ရ…၊ မင်းကိုယ်လုံးကြောင့် မြေကြီးက ပိုလေးတော့မှာပဲ….၊ ခြေကို ထောက်ပြီးလျှောက်မှ…မြေကြီးကမင်းကို ထမ်းထားရတာ…..နည်းနည်းသက်သာတော့မှာပေါ့…၊ ဟေ့ကောင်…ခြေကို ထောက်ပြီးလျှောက်…”.
သူကသာ အဲ့ဒီလိုပြောတယ်…၊ ကျနော် သူ့ခြေထောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့…..ခြေကိုအပြားလိုက်ချထားတဲ့အပြင်…လေးလံတဲ့…ကန်းထရီးဒေါက်ဆိုတာကြီးတောင်…စီးထားလိုက်သေးတယ်…။
ကျနော်…သူ့ကို…မကျေမနပ်နဲ့ ဘုရှိုးပြန်ရှိုးတော့…သူက သူ့အစွယ်တွေ…ကျနော်မြင်သာအောင်ဖြဲပြရင်း….ကျနော့်ကို ဟိန်းဟောက်လိုက်သေးတယ်….
ပြီးတော့ ကျနော့်ဘေးက လှည့်ထွက်သွားရင်းးးး
“ငါ ပြောသလိုလုပ်” တဲ့…
ပြောဖြစ်အောင် ကျနော့်ကို ပြောခဲ့သေးး…
ဘယ်လို လူမှန်း မသိဘူး…
ခုနက ပျော်နေတဲ့စိတ်တွေ…နည်းနည်း နောက်ကျိသွားရင်းနဲ့…ကျနော် ကမ်းခြေအတိုင်း…ဆက်လျှောက်တယ်…
ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော် သိပ်မအံ့သြတော့ဘူး…
“အစ်မရဲ့ ယောကျာင်္းက မလိမ္မာဘူးကွယ်…၊ ဘာမှလဲ မလုပ်ကျွေးပဲ .. အရက်ချည်းပဲသောက်နေတယ်…”
ဒါနဲ့ သူ့ယောကျာင်္းလဲ သူ့လို သိုးမျက်နှာရှင်ပဲလားမသိ….
သူမက .. ဆက်ပြောတယ်….
“အဲ့ဒါ…အိမ်မှာ….ကလေးတွေအတွက်…ဘာမှ စားစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်….ညနေစာတောင် အိမ်မှာ ဆန်မရှိဘူးရယ်……။
အစ်မကို .. မောင်လေး ပိုက်ဆံလေးဖြစ်ဖြစ်…နည်းနည်းလောက် ကူညီခဲ့ပါလားကွယ်….”
ကျနော်…အကျီင်္အိတ်ကပ်တွေ၊ ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်တွေထဲကို လိုက်စမ်းလိုက်တယ်…၊ ဘောင်းဘီညာဘက်အိတ်ကပ်ထဲက…ပိုက်ဆံတစ်ထပ်ထွက်လာတယ်….။ ကျနော် ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့….တစ်ထောင်တန်…၄ ရွက်၊ ငါးရာတန်…၂ ရွက် နဲ့ နှစ်ရာတန် ၁ ရွက်…
ကျနော်…သူမကို…သနားသွားပြီး….၅၀၀ တန်တစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်….
သူမက ၅၀၀ တန်ကို တစ်လှည့်၊ ကျနော့်မျက်နှာကိုတစ်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့…တစ်ထောင်တန် ၄ ရွက် ဆီကိုလဲ အကြည့်က ရောက်နေတယ်….။ နောက်ဆုံးလှည့်ထွက်ခါနီး ကျနော် မထင်ထားစွာပဲ….ကျနော့ကို သူမက…မျက်စောင်းထိုးသွားတယ်…။
ကျနော့်မှာ ပေးလဲပေးရသေးတယ်…။ ဒီမိန်းမ….ကျေးဇူးတင်တယ်တောင် ပြောမသွားဘူး…
လှည့်ထွက်သွားတဲ့.သိုးမျက်နှာနဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ နောက်ကျောကို ကြည့်ရင်း…ငါဘာများမှားသွားလို့လဲလို့ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း…ကျနော်..ခေါင်းခြောက်လာတယ်….
ဒါနဲ့ပဲ…ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ချင်စိတ်လဲ မရှိတော့တာနဲ့…ကုန်းတွင်းဘက်…ကျနော်…လျှောက်လာခဲ့တယ်…
ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာ ကမ်းခြေထက် လူပိုစည်တယ်…..
ကျနော့ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ…လျှောက်နေတာက ဆိတ်မျက်နှာနဲ့ အမျိုးသမီးကြီး…။ ဘေးက လူကို…
နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူ့သားအကြောင်း၊ ဘေးအိမ်က မခင်ရွှေရဲ့သား ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးကြောင်း၊ ၀ယ်နေကျ နွားနို့သည်ကုလားက ရေအလွန်ထိုးကြောင်း၊ ဈေးထဲက ပဲပြုတ်သည် ဒေါ်ဘုမတောင် အလေးခိုးကြောင်း…၊ အိမ်နားက မအေးမိရဲ့ လက်ကောက်တွေက အတုကြီးဖြစ်ကြောင်း…မနားတမ်း တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောနေတယ်…
ဘေးက ပုတ်သင်ညိုမျက်နှာနဲ့ အမျိုးသမီးကလဲ…ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ အင်းအင်း လိုက်နေတယ်…
သူတို့ ၂ ယောက်နောက် လျှောက်ရတာ နားအတော်ညီးလာတာနဲ့ ကျနော်…ရှေ့ကို ကျော်တက်လိုက်တယ်…။
ကျော်တက်ပြီး လျှောက်လာရင်းနဲ့…ကျနော့် ကျောတွေတောင်မှ…..ယားကျိကျိ ဖြစ်လာသလိုပဲ….။
ဟင်းးးးး ဟိုဆိတ်မကြီးတော့ ငါ့အကြောင်း ပြောနေပြီထင်တယ်…..
ဒါပေမယ့်…ဆိုင်ထဲမှာ…ရေနွေးအိုးလိုက်ဖြည့်နေတဲ့…..မျောက်မျက်နှာနဲ့ စားပွဲထိုးကောင်လေးရယ်….ပြီးတော့….အရင် စားထားသမျှတွေကို ပြန်ပြန်ထုတ်ပြီး စားမြုံ့ပြန်နေတဲ့ နွားမျက်နှာနဲ့ လူကြီး ၃ ၄၀ိုင်းရယ်ကို မြင်တော့ ကျနော့် စိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီး….ဆက်လျှောက်လာတယ်…
ထူးဆန်းတာက….တန်းစီနေကြတဲ့သူတွေက လူမျက်နှာတွေ ဖြစ်နေတယ်….
အံမယ်….ဘယ်ဆိုးလို့လဲ…။ ဒီမှာလဲ လူမျက်နှာတွေ…ရှိသားပဲ….။
အတွေးနဲ့ ကျနော်…ပျော်သွားတယ်….။ သွားမိတ်ဖွဲ့ဦးမှ…ဒါမှ…စကားပြောဖော်လေးဘာလေးရမှာ….
အနားရောက်တော့ နောက်ဆုံးမှာ တန်းစီနေတဲ့…အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် လူတစ်ယောက်ကို ကျနော်ပြုံးပြပြီး မိတ်ဖွဲ့လိုက်တယ်….
“သာဇံကွ..သာဇံ… ငါ့မိဘတွေက ငါ့ကို ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ စံစားပါစေတော့ဆိုပြီး အမည်သညာမှည့်ခေါ်ထားတာ….။ ခေါ်ရင်းခေါ်ရင်းနဲ့မှ….သာဇံဖြစ်သွားလို့….။ မင်းက ထပ်ပြီး ငါ့ကို နာမည်မဖျက်နဲ့ကွ…”
အဲ့ဒီလူက ရှုးရှုးရှားရှားနဲ့ ကျနော့်ကို စွာတယ်…..
“အင်းပါဗျာ…ကျနော်က စ တာပါ…ခင်ဗျားကလဲ….ဒေါနကြီးပဲ….”
ကျနော် ပြန် မျက်နှာချိုသွေးလိုက်တယ်….
“ဒါနဲ့…ခုက တန်းစီပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲဗျ……အလှူပေးနေတာလား…”
ကိုသာဇံက စကားကို ခပ်ဖြေးဖြေး တစ်လုံးချင်းပြောတယ်…
သူက ပြောလဲပြော၊ ကျနော့ကိုလဲ သေချာစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့…
“မင်း အသက်ဘယ်လောက်လဲ” လို့ … လှမ်းမေးတယ်….
ကျနော်က…. “နောက်လဆို ၂၀ ပြည့်တော့မှာဗျ..”လို့ ပြန်ပြောတော့….
ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်လဲ ကဗျာကယာ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ၀င်တန်းစီလိုက်ရတယ်…
ကျနော့်နေရာ အတည်တကျဖြစ်သွားတော့..သူက အလာပ သလာပ ဆက်မေးတယ်..
“မင်းက ဘယ်က လာတာလဲကွ…”
“ကျနော်လား..၊ ကျနော်က ဘယ်ကမှ မလာဘူး..၊ ကျနော် အိပ်မက်မက်ရင်း ရောက်လာတာ…”
ကျနော့် အဖြေကြောင့် ကိုကြီးသာဇံလဲ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားပုံပဲ…
အဲ့တော့မှ….ကျနော်လဲ ဘာမှန်းမသိဘဲ သူတန်းစီခိုင်းလို့ တန်းစီနေရတဲ့အဖြစ်ကို သတိရသွားတယ်…
“ပြောပါဦးဗျ…ဘာတွေ ရောင်းပြီး ဘာတွေ ၀ယ်တာလဲ…”
ကိုကြီးသာဇံက သူ့ဝသီအတိုင်း….ခပ်လေးလေးပဲ ဆက်ပြောတယ်…
ဆေးသည်ကတော့ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာ…၊ လူမမာတွေ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ဆေးကုပေးတယ်…။ အင်းးး ဈေးသည်ကတော့…မျက်နှာဖုံးတွေ ရောင်းတာကွ…”
ကျနော် သူပြောတဲ့ စကားကြောင့်….အံ့သြသွားတယ်…
သူ လှမ်းပြတာက…အိမ်ထဲက ထွက်လာတဲ့သူတွေကိုပါ…။ ဟုတ်ပါတယ်..၊ တချို့တွေက သမင်မျက်နှာဖုံးတွေ၊ တချို့တွေက…ခြသေ့င်္မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ပြီး ထွက်လာကြတယ်..၊ တချို့တွေကျတော့ ဆေးပုလင်းလိုလို ဖန်ပုလင်းတွေကိုင်ပြီး ထွက်လာကြတယ်…
“ငါက နောက်လဆို..စီးပွားရေး စ လုပ်တော့မလို့ကွ…
ဒီတော့ ကျီးကန်းမျက်နှာဖုံးနဲ့ ယုန်မျက်နှာဖုံး လာဝယ်တာ..”
“အိမ်း…မင်းကြည့်ကြည့်..ကျီးကန်းတွေရဲ့ မျက်လုံးက ဘယ်တော့မှ မငြိမ်ဘူးကွ…၊ အမြဲ ဘာကိုချီပြီး ပျံပြေးလို့ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ…
ငါလဲ ဒီလိုပဲကွ….၊ အခွင့်အရေးဘယ်တော့ရမလဲ အမြဲ ရှာကြံနေရမှာ…”
အင်းးးး သူပြောတော့လဲ ဟုတ်သလိုလို…
“မင်းကလဲကွာ…ဒုံးဝေးလိုက်တာ…စီးပွားရေးလုပ်ပါတယ်ဆိုမှ…ငါနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ Supplier တွေ ရှိမှာပေါ့…၊ သူတို့နဲ့ ဆုံရင် သုံးရမယ်လေကွာ….ဒါနဲ့ မင်းကရော ဘာမျက်နှာဖုံး ၀ယ်မယ်စိတ်ကူးလဲ…”
ဘာမှတော့ ခုထိ လိုသေးတယ်မတွေးမိသေးဘူး…၊ ငါ့အတွက်မလိုသေးဘူးဆိုရင်…. အမေ့အတွက်ရော။
အဖေဟောက်သမျှ အမြဲခံနေရတဲ့ အမေ့မျက်နှာကို သွားမြင်တယ်…
ကျနော် အမေ့ဖို့ကျားမျက်နှာဖုံးဝယ်ပေးမယ့်စိတ်ကူးကို ချက်ချင်းပဲ လက်လျှော့လိုက်တယ်…
မဖြစ်ဘူး..၊ ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်…တော်ကြာ အဖေ့တင်မက … င့ါဘက်ပါ လှည့်လာနိုင်တယ်…
ဟင်…မျက်နှာဖုံးတစ်ခု…ဘယ်လောက်လဲတောင် မမေးရသေးဘူး…။ မနက်က ထောင်တန်လေး ၄ ရွက်လောက်ကို သွားမြင်တော့..ပိုက်ဆံမလောက်ရင် ဒုက္ခလို့တွေးပြီး ကျနော် ပျာယာခတ်သွားတယ်…။
“ကျနော် ဘာဝယ်ရမှန်း မသိသေးဘူးဗျ……ဒါနဲ့..ကိုကြီးသာဇံ…မျက်နှာဖုံးတစ်ခု..ဘယ်လောက်ရောင်းလဲဗျ….။ ကျနော့်မှာ ပိုက်ဆံ သိပ်မပါလာဘူး…”
ကိုကြီးသာဇံက ကျနော့်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီး ပိုက်ဆံအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ကွ လို့လှမ်းပြောတယ်…။
“ဒီမျက်နှာဖုံးတွေက ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွ….။ မင်းက ဒီမျက်နှာဖုံးတွေကို ယူတဲ့အဖိုးအခအဖြစ် ပိုက်ဆံကို ပေးစရာမလိုဘူး…”
သူ့စကားကြောင့် ကျနော် ပျော်သွားတယ်….
ဒါပေမယ့်…သူ ဆက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ကျနော် စိတ်ညစ်သွားတယ်…
“မင့်အမေကြီးတော်မို့ မင်းကို အလကားပေးရမှာလားကွ….။ ဒါပေမယ့်…..မင်း ပေးရမှာ..ပိုက်ဆံတော့မဟုတ်ဘူး…၊ မင်း မျက်နှာဖုံး တစ်ခုယူတိုင်း….မင်းဆီက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ စာနာထောက်ထားမှုဖြစ်ဖြစ်၊ သိက္ခာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီထဲက တစ်ခုခုကို အဖိုးအခအဖြစ် ဒီမှာ ထားခဲ့ရမယ်….”
မျက်နှာဖုံးတွေရဲ့ အဖိုးအခက ပိုက်ဆံထက်တောင်….တန်ဘိုးကြီးနေသေးတယ်…
ဒီလိုနဲ့…ကိုကြီးသာဇံနဲ့ ထွေရာလေးပါးပြောရင်း…ရှေ့ကိုတိုးရင်း တိုးရင်းနဲ့ပဲ….အိမ်ထဲကိုရောက်လာတယ်…
ကျနော့်ရှေ့မှာ..ကိုကြီးသာဇံအပါအ၀င်မှ…လူ ၃ ယောက်ပဲ ရှိတော့တယ်…ခုချိန်ထိ ကျနော် ……
ရှေ့ဆုံးကလူက ညာဘက်မှာ…ဆေးသည်လို့..ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတဲ့…ညာဘက်က…အခန်းထဲကို…၀င်သွားတယ်…
အဘိုးကြီးက လူမမာဖြစ်ဟန်တူသူကို မေးတယ်…
လူမမာက စကား စ ပြောတယ်
“ကျနော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ခြေထောက်မခိုင်ဘူးဗျ…”
“အိမ်း…” အဘိုးကြီးက စကားထောက်တယ်…။
“ဒီတော့…ကျနော် ခဏခဏ ချော်လဲတာပေါ့ဗျာ…။ တစ်ခါတစ်လေ ဒူးထောက်ရက် ကျတယ်..၊ တစ်ခါတစ်လေ..ရင်ဘတ်နဲ့ကျတယ်…။
ဒူးခေါင်းက ဒဏ်ရာကတော့ ကျနော် ဆေးထည့်ပါတယ်…၊ ပျောက်မလိုဖြစ်လိုက်၊ ထပ်လဲလိုက်နဲ့…ဒါပေမယ့်..မြင်နေရတော့ ဆေးပုံမှန်ထည့်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါက အခု သက်သာနေတယ်…
ခက်တာက….ဟိုတစ်နေ့ကမှ…ကျနော် သတိရလို့…ရင်ဘတ်နဲ့လဲတဲ့ဒဏ်ရာကို ထုတ်ကြည့်တော့…”
ပြောပြောဆိုဆို…လူငယ်က သူ့ရင်ဘတ်ကို ခွဲလိုက်ရင်း…အထဲက တစ်စုံတစ်ခုကို လက်နဲ့ နှိုက်ယူတယ်…။
သူ့နှလုံးသားရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်က ရာဘာတုံးဖြစ်နေပြီ…
ဆေးဆရာ အဘိုးအိုက လူငယ့်လက်ထဲက..နှလုံးသားကို လှမ်းယူရင်း…ရာဘာဘက်အခြမ်းကို ခေါက်ကြည့်တယ်…။ အဘိုးအိုလက်က ပြန်ကန်ထွက်လာတယ်…
နှလုံးသားရဲ့ အသားဘက်အခြမ်းကို ထပ်ခေါက်တယ်….
နာကျင်မှုကြောင့် လူငယ့်ဆီက အသံထွက်လာတော့…အဘိုးအိုက အားနာတဲ့အကြည့်နဲ့ လှမ်းကြည့်တယ်….
ပြီးတော့…သူ့လက်ထဲက လူငယ်လေးရဲ့ နှလုံးသားကို…အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ကြည့်ပြီးတော့….
“လူလေးနှလုံးသားက အတော်ကိုဆိုးနေတယ်….၊ အရင်အတိုင်း…ပြန်ဖြစ်ဖို့တော့….”
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ…နာကျင်မှုကြောင့် ညည်းညူနေတဲ့ လူငယ်က ခြေကာကာလက်ကာကာ၊ ခေါင်းတစ်ခါခါလည်တစ်ခါခါနဲ့ ပြန်ပြောတယ်…..
“မဟုတ်ဘူး အဘိုး၊ မဟုတ်ဘူး…၊ အဘိုးထင်တာ မှားနေပြီ…..။ ကျနော် အရင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး…၊
ကျနော် အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကို ရာဘာချည်းပဲ ဖြစ်ချင်တာပါ…”
အဘိုးအိုဆီက “ဟေ” ဆိုတဲ့ အာမေဋိတ်သံ ထွက်လာတယ်…
“စိတ်မကောင်းပါဘူး…လူလေးရယ်…၊ အဘိုးဒါတော့ ကူညီနိုင်မယ်မထင်ဘူးကွယ်…..”
အဘိုးအိုစကားအဆုံးမှာ…မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့လူငယ့်ဆီက ဟင်းးးး ကနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချသံထွက်လာတယ်…
“ဒါပေမယ့်…မပူပါနဲ့ကွယ်….၊ မင်း ရင်ဘတ်နဲ့ခဏခဏလဲကျတဲ့အခါ၊ မင်းမိသားစုက မင်းကို နားမလည်တဲ့အခါ၊ မင်းသူငယ်ချင်းတွေက မင်းကို လှောင်ပြောင်ကြတဲ့အခါ၊ မင်းတန်ဘိုးထားတဲ့သူတွေ၊ မင်းသံယောဇဉ်ရှိတဲ့သူတွေ၊ မင်းချစ်တဲ့သူတွေက မင်းရင်ဘတ်ဆီကို … သူတို့ရဲ့ အတ္တတွေ၊ ဒေါသတွေ၊ သံသယတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ကြတဲ့အခါ….မင်းနှလုံးသားဟာ…ခပ်မြန်မြန်ပဲ..ရာဘာတုံးတစ်ခုလိုပဲ…ထုံသွားပါလိမ့်မယ်…။”
လူငယ်လေးလဲ…ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အဘိုးအိုကို ပြောပြီး ထ ထွက်သွားတယ်…။
ထူးဆန်းတာက …အဲ့ဒီလူ တစ်ကိုယ်လုံးဟာ…အနီရောင်တွေချည်း ဖြစ်နေတယ်..
ထိုသူ အဘိုးအိုရှေ့ရောက်ရင်ပဲ…ရည်ရွယ်ချက်မရှိ..စားပွဲကို တဒုန်းဒုန်းထုရင်း…သူ ခုလိုတွေ့ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာထိ တန်းစီနေရကြောင်း ပြောတယ်…
“ဒီမှာကြည့် အဘိုးကြီး…၊ ကျုပ်ရဲ့ ခနာကိုယ်ကို…၊ ကျုပ်ငယ်ငယ် ၁၅နှစ်သားလောက်ထိ….လူ့အသားအရည်အတိုင်း ရှိနေတုန်းပဲ….။ ဒါပေမယ့်…..ကျုပ်မိသားစု တောင်ဘက်ပိုင်းကို ပြောင်းခဲ့တော့ ကျုပ်လဲ အတူပါလာရင်း….အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက…ကျုပ်ကို အနက်ရောင်တွေနဲ့ ၀ိုင်းပက်ကြတယ်…။ ဟော..ခု အရှေ့ဘက်ကို ပြောင်းတော့ ကျုပ်ကို အနီရောင်တွေနဲ့ ၀ိုင်းပက်ကြပြန်ပြီ….
အဘိုးအိုက “ရပါတယ်….” လို့ ခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်ပြီး…ဘယ်ဘက်အခန်းက မျက်နှာဖုံးရောင်းတဲ့ ဈေးသည်ဆီကူးသွားတယ်….
ပြီးတော့…ခုနက မျက်နှာဖုံးဝယ်တဲ့သူတွေ…အဖိုးအခအဖြစ်… ထားသွားတဲ့…ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် နဲ့ ကြင်နာခြင်း ပုလင်း ၂ လုံးကို ယူပြီး လူမမာကို ပေးရင်း……….
ဒီဆေး ၂ ဖုံကို မနက်၊ နေ့လည်၊ ည သောက်ပါ…၊ နောက်တစ်ပတ်နေရင် ပြန်လာပြပါလို့ သေချာမှာနေတယ်..။
အဲ့ဒီလူလဲထွက်သွားရော…ကိုကြီးသာဇံလဲ မျက်နှာဖုံးဝယ်ဖို့….မျက်နှာဖုံးရောင်းတဲ့ ဘယ်ဘက်အခန်းက အဘိုးအိုဆီကို ၀င်သွားတယ်…။
သူပြောခဲ့သလို…ကျီးကန်းမျက်နှာဖုံးနဲ့…ယုန်မျက်နှာဖုံး ၂ ခုဝယ်တယ်…။ ၀ယ်ပြီးတော့မှ လိုလိုမယ်မယ်ဆိုပြီး ဗျိုင်းမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုပါ ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်…..
မျက်နှာဖုံးရောင်းသူ အဖိုးအိုက….”ဘာယူမလဲ လူလေး” လို့…မေးတဲ့အချိန်ထိ…ကျနော် ဘာမျက်နှာဖုံးဝယ်ရမလဲ သေချာမသိသေးဘူး….
နောက်တော့…..ကျနော်…သေချာစဉ်းစားပြီး….ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့လေသံနဲ့ အဘိုးကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်….
အဘိုးအိုက ခဏငြိမ်သွားပြီး ကျနော်ပြောတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးကို ရှာနေတယ်….
ရှာတွေ့တော့…သူ့လက်ထဲမှာ…ပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးကို ကိုင်ထားရင်း…ကျနော့်ကိုမပေးသေးဘဲ..မေးခွန်းတစ်ခု မေးတယ်…
“လူလေးက ဘာလို့…ဒီမျက်နှာဖုံးကို လိုချင်တာလဲ…”
“ပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးက ၀မ်းနည်းခြင်း မျက်နှာဖုံးထက်စာရင်…ပိုလှတယ်မဟုတ်လား…”
ကျနော့်အဖြေကြောင့် အဘိုးက မျက်နှာကြီးပြုံးသွားရင်း….မင်းက တယ်လှချင်ပါလားလို့ ပြန်ပြောတယ်…။
ဒီမျက်နှာဖုံးကျနော်တပ်ထားရင်…ကျနော့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေလဲ ကျနော့်မျက်နှာကိုမြင်ရင်…ပျော်မယ်မဟုတ်လား…၊
တကယ်လို့ ကျနော့်ကို မုန်းတဲ့သူတွေ …ကျနော့်မျက်နှာကို…မြင်ရင်လဲ… သူတို့မုန်းတဲ့ပမာဏအတိုင်းပဲ…ဒီမျက်နှာဖုံးကို ကြည့်ရင်း…စိတ်ညစ်သွားနိုင်ကြတာပေါ့….
အဘိုးက ကျနော့်အဖြေကို …လက်ခံပါတယ်….
လက်ခံတဲ့အပြင်…အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးကို…ကျနော့်မျက်နှာမှာ…စနစ်တကျတပ်ပေးရင်း….မင်းရည်ရွယ်ချက်က ဒီလိုဆိုရင်…..ဒါဟာ မျက်နှာဖုံးတစ်ခုဆိုတာ…လူမသိပါစေနဲ့ လို့…ခပ်တိုးတိုးမှာတယ်…။
အဘိုးအိမ်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်မှန်ကနေ မြင်နေရတဲ့ ကျနော့်မျက်နှာကို ကျနော်…အတော်သဘောကျနေတယ်…။ အဘိုးတပ်ပေးလိုက်တဲ့မျက်နှာဖုံးဟာ…ကျနော့်မျက်နှာပေါ်မှာ ရောက်နေပြီ…….။ မျက်နှာဖုံးပေါ်က…ကျနော့် နှုတ်ခမ်းတွေဟာ… ပြုံးနေကြတယ်…၊ ကျနော့်မျက်လုံးတွေကလဲ အပျော်တွေနဲ့ တလက်လက်တောက်ပနေတယ်….။
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ…..အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးကို ကျေနပ်စွာကျနော်တပ်ရင်း….မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့…အပြင်လောကကြီးဆီကို ကျနော် … ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်…
မျက်နှာဖုံးတစ်ခုမှ မပိုင်ရင် လူရာမဝင်တဲ့ အချိန်မို့ နေမှာပါကွယ်။
ကြာတော့လည်း မျက်နှာဖုံး အောက်က မျက်နှာ အစစ်ဟာ ဘယ်လိုလဲလို့ မတွေးမိတော့ပဲ မျက်နှာဖုံးလေးတွေပဲ ကွက်ကြည့်မိရင်း နေသားတကျ။
မျက်နှာ အစစ်ကိုတောင် မမြင်ရမှတော့ နှလုံးသား အစစ်ကို မြင်ရဖို့ဝေးးး
နောက်တော့လည်း ဒီ အရာတွေကို အစစ်လို့ ဇွတ်မှတ်ယူရင်း သက်တမ်းကုန်ရဦးမှာပါပဲ။
နောက်ကျောကို ထိုးတဲ့ ဒါးချက်နဲ့ သက်တမ်းကုန်မလားး
ရှေ့တည့်တည့်က ကျည်ဆံနဲ့ သက်တမ်းကုန်မှာ လား ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။
ပြသထားတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာရှိတတ်သလဲ လို့ အချိန်ပေးမစဉ်းစားတော့ ကြာပါပေါ့။
ရှိနေတဲ့အချိန်တော့လဲ … အကောင်းဆုံး ကြိုးစားတာပေါ့…နော့..
ကျနော့်ကိုတော့ အကြွေးကင်းတဲ့ မျက်နှာဖုံးပေးပါ ၊
မရှိတော့တဲ့ သိက္ခာတွေကို ထားခဲ့ပါ့မယ် ၊
အကြွေးကတော့ ဘယ်သူမှ … မကင်းနိုင်ဘူး မဟုတ်လား..ဦးမျိုးရဲ့…
ပိုက်ဆံချေးထားရင်…သူငယ်ချင်းတွေက မမေ့တတ်ကြလွန်းလို့…ကောင်းကင်ပြာတောင် တစ်ယောက်နည်းနည်းစီ..ပိုက်ဆံလိုက်ချေးနေတယ်…
ဆေးဆရာကြီး ဆီ သွားပြီးတော့ပဲ ရာဘာ မျက်နှာ ရာဘာ နှလုံးသား ဖြစ်သွားအောင် ကုပေးဖို့ တောင်းဆိုရင် ကောင်းမယ် ထင်တာပဲ။း)
စိတ်မကောင်းပါဘူး…ဂျက်ရယ်…။ အဘိုးဒါတော့ ကူညီနိုင်မယ် မထင်ဘူးကွယ်….
..ကျော့်မှာလဲအဲ့လိုပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးတခုရှိပါတယ် … ကျော်ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးက ..ကျော့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းပါပဲ..တစ်ခါတလေ…တစ်စုံတစ်ယောက်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်….
…မျက်ရည်တိတ်တိတ်ကလေးကျဖူးပါရဲ့ ..ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်..ကွကိုယ်.လောင်ကျွမ်းသွားပစေ…တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ..လမ်းပြပေးနိုင်ရင်တော်ပြီ..ရိုးရိုးလေးပါ .မှောင်နေတဲ့.လောကကြီးအတွက် …ဖယောင်းတိုင်တတိုင်ဖြစ်ချင်တယ် ….
တစ်စုံတစ်ယောက်ပျော်ရွှင်ဖို့ မျက်ရည်ကျပေးလိုက်ရင်…ဘရားသားမျက်ရည် အလဟသ မဖြစ်ပါဘူး….။ အနည်းဆုံးတော့ လူတစ်ယောက် ပျော်သွားတယ်လေ…။
လောကကြီးကတော့ အရမ်းမှောင်နေတယ်…။ ဖရောင်းတိုင်အလင်းရောင်လောက်နဲ့ မတိုးနိုင်ဘူးထင်တယ်…။ ဒါပေမယ့်…လုံးဝမလင်းတာထက်စာရင်တော့…အလင်းရောင်တော့ ဖြစ်မှာပါ….။
သဂျီးတို့ရွာမှာ…မီးအိမ်လေး လုပ်ပါ….။ (မြန်မာပြည်ကတော့ အက်ဒီဆင်ကို ဂုဏ်ပြုတာ များလွန်းတယ်..)
ကျနော် အရမ်း နှစ်သက်တဲ့ ဆရာတာရာမင်းဝေ တို့ ရေးတာလိုမျိုး
အဲ ရိုးရိုးလေး လို့လည်း ပြောချင်တယ်။
မာမီနှစ်ယောက် ရေ နစ် သေဆုံးသွားလေရဲ့။
ဒီ စာမူနဲ့တော့ ကွာဘ
ဆရာတာရာမင်းဝေတို့ ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန်တို့က ကောင်းကင်ပြာအရမ်းကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာတွေထဲ ပါတာပေါ့…။
ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့စာတွေ နောက်ပိုင်းမတွေ့တော့ ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန်ရဲ့ စာတွေ ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဆရာဘာသာပြန်တဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာရဲ့ မိစ္ဆာခန်းဆောင် ကိုဖတ်ပြီးတော့ နောက်အခန်းတွေ ဘယ်သူဘာသာပြန်တာမှ မတိုးတော့လို့ အတော်အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်…။
သူတို့ရဲ့ ရေးဟန်တွေကလဲ အနည်းနဲ့အများတော့ ကောင်းကင်ပြာကို လွှမ်းမိုးပါတယ်…။
မာမီနှစ်ယောက် ရေ နစ် သေဆုံးသွားတာကတော့….သူရို့ ၂ ယောက် ဖလန်းဖလန်းထ တာ များသွားလို့ ဖြစ်မယ်ကွယ်…
ဆရာခိုက် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ
မိစ္ဆာခန်းဆောင် . . . .
တခြား( ကြည်ကြည်မာဆိုလား ဘာသာပြန်ထားသေးတယ်) မတိုးတော့ဘူး။
ဆရာခိုက် ဘာသာပြန်တာက ရုပ်ရှင် ကြည့်နေရသလို
ပြီးတော့ အရမ်း ဂွတ်တယ်။
တာရာမင်းဝေတို့ လိုင်းကို နှစ်သက်သူချင်း တွေ့ ဆုံရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
..ဖတ်ရတာ ရသမြောက်တယ်လို့ ခံစားရတယ်..အစကနေ အဆုံးထိ မရပ်ဘဲ ဖတ်ချင်အောင်လဲ ..ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်
..မျက်နှာဖုံးတွေ အကြောင်းစဉ်းစားမိတာ တစ်ခုတော့ရှိတယ်…လူတွေဟာ အခြေအနေနဲ့ …အချိန်အခါကိုလိုက်ပီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မဲ့ မျက်နှာဖုံးတစ်ခုစီတော့ …အမြဲတပ်ထားလေ့ရှိကြတာဘဲမှုတ်လား ????
ဟုတ်ပါတယ်…မရွှေအ်ိရေ…လူတွေဟာ..အခြေအနေနဲ့ …အချိန်အခါကိုလိုက်ပီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မဲ့ မျက်နှာဖုံးတစ်ခုစီတော့ …အမြဲတပ်ထားလေ့ရှိကြတာပါပဲ…
ပညာတတ်….လူ့ယဉ်ကျေးတွေများလာလေ…၊ သူတို့ဆောင်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ များလာလေပဲ .. ထင်ပါတယ်…။
ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကောင်းကင်ပြာ နေခဲ့ဖူးတဲ့ နယ်မြို့လေးတွေမှာတော့…အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးတွေက မရှိသလောက်ရှားလို့ပါ…။
ကျားနဲ့တွေ့လဲ လိုက်လျောညီထွေ၊ သိုးနဲ့တွေ့လဲ လိုက်လျောညီထွေ..
ဒါလို လိုက်လျောညီထွေတတ်တာလဲ…ပညာရပ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား…
.အရေးအသားနဲ့အတွေးစဉ်လေးကိုတော့ လက်ဖျားခါတယ်ဗျာ…အဲ့လိုရေးတတ်ချင်တယ်.. :p:
.မေ့သွားလို့…စာနဲ့ အောက်ဆုံးကပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးတတ်ထားတဲ့ပုံလေး လိုက်ဖက်တယ်လို့ :))
ဦးကြီးမိုက် ချီးကျူးတာနဲ့တင်…ဒီပိုစ့်အတွက်…ပင်ပန်းရတာ တန်သွားဘီ….
အဲ့ဒီထဲက တစ်ခုခုကို အဖိုးအခအဖြစ် ဒီမှာ ထားခဲ့ရမယ်….”
ပျော်ရွှင်မှု မျက်နှာဖုံးလေးတော့ လိုချင်သား…
ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ သိက္ခာ ကိုတော့ ထားခဲ့လို့ မဖြစ်
ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ၊ စာနာထောက်ထားမှု တစ်ခုခု ထားခဲ့ရမလား ဆိုတော့လဲ…
ဒါတွေမရှိရင် နေပျော်အောင် နေနိုင်မှာမဟုတ် …ဆိုတော့
ကောင်းကင်ပြာ ဘာကိုထားခဲ့လဲ …..
ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ် ၊ ပြေပြစ်တဲ့ အရေးအသားမို့ ဗရာဗိုပါ ကောင်းကင်ပြာရေ …
ဦးကျောက်စ်ရဲ့ ဗရာဘိုအတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ…။ လာအားပေးတာလဲ ကျေးဇူးပါပဲ ဦးကျောက်စ်ရေ…
အဘိုး ကျမကို အဲဒီလို မျက်နှာဖုံး မျိုးစုံ အများကြီး လုပ်ပေးပါ
ဒီမျက်နှာဖုံးတွေကတော့ တန်ဘိုးကြီးတယ် မနောရေ…
အနော့ကိုလည်း ရာဘာမျက်နှာဖုံး မျိုးစုံလုပ်ပေးပါ ရုပ်ရှင်လောကထဲက ရုပ်ဖျက်တဲ့ ပညာသည်တွေကို ပြန်ရောင်းမလို့
စာလေး ပြန်တွေ့ ရတာ ပျော် သွားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုစိုက် သမီး ရေ့။
ဘုန်းကြီး ကျောင်း က ဆရာတော် ဟောဘူးတာ။
အရီး တို့ တွေ က ကျန်းမာရေး တွေ ပျော်ရွှင်မှု တွေ ကို ရင်းပြီး ပိုက်ဆံတွေ ရှာနေကြရတာ တဲ့။
တကယ်တော့ အဲဒီ ပိုက်ဆံ တွေ ကလဲ အဲဒီ ကျန်းမာရေး တွေ၊ ပျော်ရွှင်မှု တွေ အတွက်ဘဲ ပြန်သုံး ကြရသတဲ့။
ဘဝ မှာ ပိုက်ဆံ၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို Balance လုပ်ကြဖို့ သတိပေးစကားလေးပေါ့။
ရိုးရိုးလေးပေမဲ့ အများကြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။
အခု ဒီ ဝတ္တုလေး ထဲ ကလိုပေါ့။
ပျော်ရွှင်မှု မျက်နှာဖုံး အတွက် ပျော်ရွှင်မှု ကို ပေးလိုက်ရသလိုပေါ့။
အရီး စဉ်းစားနေတယ်။ သိလား။
အဲဒီ မျက်နှာဖုံး တွေ က သက်တမ်း ဘယ်လောက်ခံ မလဲ ဆိုတာ။
တစ်ခါဝယ်ပြီး တစ်သက် သုံးပေရော့လား။
နောက် အဲဒီ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ ဆိုတာ လျှော့သွားတိုင်း ပြန်ဖြည့် လို့ ရလားလား
မဟုတ်ဘဲ ပေးလိုက်ပြီး ပြန်မဖြည့် နိုင်တော့ ခက်သား။
ကိုယ် နောက်ထပ် မျက်နှာဖုံး လိုချိန်ကျ ဘယ့်နှဲ့ လုပ်ပါ။
နောက်တစ်ခါ အိမ်မက် ထဲ မှာ အဲဒီ အဘ ကို သတိပေးလိုက်ပါနော်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ ကို အတု တွေ လုပ်ပြီး လာဝယ် မစိုးလို့။
အဲလိုသာ ဆိုလို့ ကတော့ ဟိုဘက် က ဆေးသည် အဘ ရဲ့ လူနာ တွေ တော့ ဒွတ်ခ ပါဘဲ။ (စီဒီ – သဲ)
PS – နောင်ရိုး တစ်ယောက်ရော စိတ်ပြန်ကောင်းသွားပြီလား။
သူ့ကိုလဲ အရီးက မေးတယ် ပြောလိုက်စမ်းပါ။
သူ အပျော်တွဲပြီး ထားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တွေ ရဲ့ မေတ္တာစူး နေပြီလားလို့။
ကောင်းကင်ပြာကလဲ အရီး ကောင်းကင်ပြာရဲ့ ပိုစ့်ထဲဝင်မန့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်…။
ပြန်Sharing လုပ်တဲ့ ဆရာတော်ဟောတဲ့စကားအတွက်လဲ ကျေးဇူးပါပဲ အရီးရေ…
“အရီး စဉ်းစားနေတယ်။ သိလား။
ကိုယ် နောက်ထပ် မျက်နှာဖုံး လိုချိန်ကျ ဘယ့်နှဲ့ လုပ်ပါ။”
Refill လိုမျိုးလား အရီး…???
ဒါပေမယ့်..ရိုးသားခြင်း၊ စစ်မှန်ခြင်းတစ်ခုခုကို အတုအယောင်နဲ့ ဖုံးကွယ်လိုက်တိုင်း…အဲ့ဒီအတုအယောင်က ပျောက်ပေးရတယ်….။ ဘယ်အချိန်မဆိုပဲ..။ အတုတစ်ခုနဲ့ ဖုံးကွယ်လိုက်တိုင်း အစစ်အမှန်က ပျောက်သွားရတယ်..။
ကောင်းကင်ပြာတော့ အဲ့ဒီလိုပဲ ထင်ပါတယ်…။
ကျုပ်ကတော့ အစကတည်းက သတိထားမိပါတယ်.. ရေးထားတဲ့စာလေးကို ဖတ်မိလိုက်ပြန်တော့လည်း အရေး၊ အတွေးက ကောင်းပါပေတယ်
အစကနေ အလယ်လောက်ရောက်လာတော့ အဖိုးအခ ဆိုတာ ဘာများလဲ သိချင်လာရော၊
အဖိုးအခဆိုတာ သိလာပြန်တော့ ဘာများဝယ်မှာလဲဆိုပြီး သိချင်လာပြန်ရော၊
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုသိမ်းလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာအောင် ရေးတတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ စာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ဘာပေးချင်တာလဲဆိုတာကို သေချာတွေးပြီး သေသေချာချာ ပေးဖြစ်သွားအောင် ပေးနိုင်တာရော သဘောကျသဗျာ။
နောက်ဆုံးမှာ ကိုကောင်းကင်ပြာရဲ့ ကောင်မလေးပုံကို တင်ပြီးကြွားသွားတာတော့ မလိုနာဘူး။
လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ.. ဟောလိဝုဒ်မှာ.. မြို့ကြီးတွေ.. နိုက်ကလပ်တွေ.. အိမ်တွေအထိအောင်ပေါ့..
လူထီးတွေ.. လူမတွေ.. လူဂေးတွေ.. မျက်နှာဖုံးမျိုးစုံတပ်ကြတယ်..။
ကလေးတွေက. ၀တ်ရုံကြီးတွေခြုံ.. မျက်နှာဖုံးတွေတပ်.. အိမ်တွေကိုလိုက်တံခါးခေါက်..
လှည့်စားမလား.. ပြုစုမလား… တဲ့…။
လှည်းစားတာနဲ့ပြုစုတာစကားနှစ်လုံးထဲက တစ်ခုစီယူပြီး ပြောမယ်
Halloween day ကို​သွားချင်​တာ..မနှင်းဖြူ​ပေါ့ပုံ​ပြောပြီးပြန်​သွားတယ်​။ မျက်​နှာဖုံးမတပ်​လိုက်​ရဘူး။ ​ကောင်းကင်​​ပြောတဲ့မျက်​နှာဖုံး​တွေက​တော့အမ မှာရှိတယ်​၀ယ်​စရာမလိုဘူး။ ကြိုက်​တဲ့အချိန်​​ကောက်​စွပ်​ပလိုက်​ရုံပဲ။ ရုံးမှာမန်​​နေဂျာနဲ့​ပြောရင်​တစ်​ခု။ အုံနာနဲ့ဆိုတစ်​ခု။ တခြားဌာန​တွေနဲ့ဆိုတစ်​ခု. စပလီုင်​ယာ​တွေနဲ့ဆိုတစ်​ခု…အများကြီးပဲ..:-D
ခင်ဗျားမြှောက်တာနဲ့ကျုပ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းမျက်နှာဖုံးကနေ မြင်းမျက်နှာဖုံးပြောင်းတပ်လိုက်ရတယ်။ တဟီးဟီးနဲ့ကို ဖြစ်သွားလို့
အေးဗျာ ပုံထဲကတစ်ယောက်တော့ ရွာသားချင်းမို့ ပြောရဦးမယ်။ ဝေးဝေးကရှောင်ပါဗျာ။ ခင်ဗျားမမှားပါဘူး။ နည်းနည်းမှ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။
အဲဒါ ကင်းကောင် ဆိုလို့ ကတော့ အရမ်းကို ချစ်ဖို့ ကောင်း တဲ့ မိန်းကလေး ပါဘဲ။
မျက်နှာလေး က တစ်အား အေးချမ်းတယ်။
မျက်နှာဖုံး မလိုအောင် ကြည်လင် ပျော်ရွှင် နေပြီး သား နေမှာပါ။
နည်းနည်းတော့ ခက်တယ်ထင်ပါတယ်….။ ခုမှ ကြိုးစားနေတုန်းပါ…။
ငါ့ကြတော့ အဖက်မလုပ်ဗူး.. ဒီကေဘီအေ ကယင်သဗုံမ… မော်တာနဲ့ ထုလိုက်ယ..
တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ဖို့လဲ….တွေးထားပြီးသားပါ….။ လူအားမဟုတ်တောင် … ငွေအားနဲ့တော့ တတ်နိုင်သလောက် ပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…။
အူးကြောင်လဲ ရေးထားတဲ့စာလေးလာဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကြောင်း…
စာကြမ်းပိုးပြောလို့ (လင့်ပေးလို့) လာပြေးဖတ်မိတာ..
အကြောင်းအရာ အတွေး နဲ့ ရေးဟန် က တစ်သားတည်း ညီညွတ်တယ်…
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဦးပါရေ……
စာဖတ်ရင်း ငါ့မျက်နှာပေးမှာ ဘာမျက်နှာဖုံးများ ရှိနေပါလိမ့်ဆိုပြီး စမ်းမိတော့မလို ဖြစ်သွားတယ်….
အာတီဒုံဆိုရင်တော့…ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မျက်နှာဖုံးတစ်စုံတော့ သေချာရှိမှာပါ…
မျက်နှာဖုံးတွေကတော့ နေရာအနေအထားနဲ့…ဆက်ဆံရတဲ့ဝန်းကျင်ပေါ်လိုက်ပြီး ကွဲပြားမယ်ထင့်…
အဲ့လိုဆန်ဆန်လေး ဖတ်ဖူးတယ်… မြန်မာလိုတော့ဟုတ်ဘူး…
စာများများရေးပါ ကောင်းကင်ပြာလေးရေ… :))
Burmese Rose says:
စစဖတ်ချင်းက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပဲထင်လို့။ အရမ်းလေးနက်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ။ ကောင်းကင်ပြာရဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီးတော့ အတွေးတွေ အများကြီးတွေးဖြစ်တယ်။ ဒီလောကမှာ မျက်နှာဖုံးနဲ့ကင်းတဲ့သူ ဘယ်သူများရှိမလဲ…
Burmese Rose က အဲ့လိုတွေးတယ်…။
ကောင်းကင်ပြာတော့ အဲ့တစ်လောက ဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့သူတွေ၊ မြင်နေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ရင်း..သူတို့မှာ..ဘာမျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ထားတာလဲလို့..လိုက်လိုက်တွေးမိနေတယ်…။ လှည်းတန်းတို့လိုနေရာတွေ၊ မြေနီကုန်းတို့လိုနေရာတွေဆို သိပ်တွေးလို့ကောင်း…အဟိ…
ရုံးကလူတွေတောင် သူတို့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း အတင်း လာပြောရင်..ဒီဆိတ်မလေးတွေတော့ စ ပွားပြီလို့ တွေးမိတဲ့အထိ…ဟီးဟီး..
ကျေးဇူးပါ..မ တတ် ပါ့ ရေ…
မ တတ် ပါ့ရဲ့ စာတွေကိုလဲ…အားပေးနေပါတယ်…
စာကြမ်းပိုးအညွှန်းနဲ့ အခုမှ ၀င်ဖတ်ဖြစ်တာ …
အရမ်းကောင်းတဲ့ အရေးအသားနဲ့ အတွေးအခေါ်ပဲ …
နောက်ကျမှ ဖတ်ဖြစ်လိုက်ပေမယ့် ဖတ်ဖြစ်သွားလို့ တော်သေးတယ် ..
ဒီလိုစာသားလေးတွေ..ဘယ်လောက် Heart ထိစေလဲ…
ကောင်းကင်ပြာ..ခရီးတွေထွက်ဖြစ်ရင်လဲ…ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ စမ်းရေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်…။ မဝေကို အားကျလို့….
ကျ​နော့်​ ကို​တော့ ​ကြောက်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ဘီလူးမျက်​နှာဖုံးတစ်​ခု​ပေးပါ
ဆုရမှပဲ ၀င်ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်… ဘရာကြော်ပါ ကောင်းကင်ပြာလေး :sar:
ဘယ်အချိန်ပဲ လာဖတ်ပေးပေး…လာဖတ်ပေးရုံနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကင်းကောင်ပြာလေးကို နေ့ရောညပါ ဖက်ခြင်တှာ… လူလစ်လဲဖက် လူရှင်းလဲဖက် လူရှေ့လဲဖက် ဖက်မဲကွာ… ပြီးတော့ ရှလွတ်… ငါကွ
လူနဲ့လောကကို Scene တစ်ခုချင်းစီ အလျားလိုက်ခင်းခင်းပြသွားလိုက်တာ…နောက်ဆုံးစာကြောင်းထိ ဖတ်နေတဲ့လူကိုတွေးအားကူဖြည့်ဖို့ ဗလာနယ်ထားခဲ့တာကြီး…လှလိုက်တာ..တွေးတတ်ရေးတတ်လိုက်တာ…ဒီလိုစာမျိုး နောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့ရတာ မှတ်မှတ်ရရ တာရာမင်းဝေရဲ့ ပွဲတော်ညတို့ လူနဲ့ကမ္ဘာပတ်လမ်းတို့ပါပဲ…ကျေနပ်လိုက်တာ